Ngelixa ndisenza inkqubela phambili, andizichazi njengomphuhlisi oyinyani. Ndiyakwazi ukwenza inkqubo kunye nokuhambisa izinto kwiphepha kwaye ndiyenze isebenze. Umphuhlisi oyinyani uyayiqonda indlela yokuphuhlisa ikhowudi ukuze ikalwe, ingathathi izinto ezininzi, zilayishe ngokukhawuleza, zilungiswe ngokulula kamva kwaye zisasebenza.
Indawo enzima abathengisi ababekwa kuyo bobabini banayo ngokukhawuleza okukhulu kwiwebhu kwaye usabandakanya ukudityaniswa kunye nezinto zentlalo ezinokudala ukuxhomekeka ekubeni indawo yakho izakulayisha ngokukhawuleza kangakanani. Omnye umzekelo ngu amaqhosha ezentlalo. KwiMartech, sinamaqhosha entlalontle kwiphepha ngalinye kwisiza. Ke… ukuba izixhobo ze-Facebook zilayishwa kancinci ngolunye usuku, iyacothisa indawo yethu. Emva koko yongeza i-Twitter, iPinterest, iBuffer, njl.nje kuloo ndawo kunye namathuba esiza sakho sokulayisha ngokukhawuleza ancitshisiwe angabinanto.
Oko kwaziwa njengokulayisha ngokuhambelana. Kuya kufuneka ugqibe ukulayisha into enye phambi kokuba ulayisha into elandelayo. Ukuba uyakwazi ukulayisha izinto ngokuzithandela, uyakwazi ukulayisha izinto ngaphandle kokuxhomekeka komnye nomnye. Ungasiphucula kakhulu isantya sendawo yakho ngokulayisha izinto ngokuzithandela. Ingxaki kukuba izikripthi ezingaphandle kwebhokisi ezibonelelwa zezi nkampani phantse azilungiswanga ukuba ziqhubeke njenge-asynchronous.
Uyayibona into echaphazela isantya sephepha lakho ngokwenza uvavanyo kwiPingdom:
Nantsi i-snippet yendlela yokwenza ngokufanelekileyo kwi-Emil Stenström: